~ Witch83၏ စိတ်ကူးကမ္ဘာ ~: February 2013
ထမင်းစားပြီးပြီးချင်း မပြုလုပ်သင့်သော အချက်(၇)ချက်
အင်တာနက်ပေါ်က ဖတ်မိသိရှိရတဲ့ "Seven Dangerous Acts After A Meal"ကို ဘာသာပြန်ပြီး ပြန်လည်ဝေမျှပါတယ်။
As we always say, Sharing is Caring. :)
Do not smoke: ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တွေဟာ စမ်းသပ်လေ့လာမှုတွေ ပြုလုပ်ပြီးတဲ့နောက် တွေ့ရှိခဲ့တာက... "ထမင်းစားပြီးပြီးချင်း ဆေးလိပ်တစ်လိပ် သောက်ခြင်းဟာ သာမာန်အချိန် ဆေးလိပ်(၁၀)လိပ် သောက်သုံးခြင်းနဲ့ တူညီပါတယ်"တဲ့။ ကင်ဆာရောဂါဖြစ်နိုင်ချေကို ပိုမို မြင့်တက်နိုင်စေပါတယ်။ ( This will also apply to passive smokers, I suppose.)
Do not eat fruits immediately: ထမင်းစားပြီးပြီးချင်း သစ်သီးစားသုံးခြင်းဟာ အစာအိမ်ထဲမှာ လေတွေဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။ ဒါကြောင့် သစ်သီးတွေစားမယ်ဆိုရင် ထမင်းမစားမီ တစ်နာရီ (သို့မဟုတ်) ထမင်းစားပြီး တစ်နာရီ၊ နှစ်နာရီနေမှ စားသင့်ပါတယ်။
( တကယ်အဟုတ်ဆိုရင်တော့ သေတာပဲ...ကိုယ်အလေးချိန်ကို လျှော့ချင်တာနဲ့ အစားကို နည်းနည်းလျှော့ပြီး ထမင်းစားပြီးတိုင်း အသီးစားနေတာ.. :( သစ်သီးတွေနဲ့ ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေဟာ အသားငါးတွေထက် အစာချေရတာ ပိုခက်တယ်ဆိုတာတော့ ကြားဖူးပါတယ်။)
Do not drink tea: လက်ဖက်မှာ အက်ဆက်ဓါတ်တွေအများကြီးပါလို့ အစာအိမ်ထဲမှာရှိတဲ့ အက်ဆစ်ဓါတ်ပမာဏကို တိုးပွားစေပါတယ်။ အဲ့ဒီတိုးပွားလာတဲ့အက်ဆစ်ဓါတ်တွေဟာ ကျမတို့စားထားတဲ့ အစားအစာတွေရဲ့ ပရိုတိန်းဓါတ်ကို တိုး ပွားစေတဲ့အတွက် အစာချေဖို့ခက်ခဲသွားပါတယ်။
( weight လျှော့ချင်တဲ့သူတွေ ရေနွေးကြမ်းသောက်ရတာတော့ အမှန်ပဲ။)
Don't loosen your belt: အစားစားပြီးပြီးချင်း ခါးပတ်လျှော့ခြင်းဟာ အူတွေကို ခွေခေါက်စေတတ်ပါတယ်။
( ဒါက လုပ်တတ်တယ်။ သတိထားမှ.. :P)
Don't bathe: ထမင်းစားပြီးပြီးချင်း ရေချိုးခြင်းဟာ လက်၊ ခြေထောက်နဲ့ တခြားခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းတွေဆီကို သွေးစီးဆင်းမှုပိုမိုဖြစ်ပေါ်စေပြီး အစာအိမ်ဆီကို သွေးစီးဆင်းမှုနည်းသွားစေပါတယ်။ အဲ့ဒါကြောင့် အစာခြေတဲ့ system ကို အားနည်းစေပါတယ်။
Don't walk about: ဒါကတော့ လူတော်တော်များများ လုပ်တတ်တဲ့ မှားယွင်းတဲ့အယူအဆပါ။ အစာစားပြီး လမ်းလျှောက်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့် အစာခြေsystemဟာ ကိုယ်စားထားတဲ့ အစာအဟာရတွေ မစုပ်ယူနိုင်တော့ပါဘူး။
(ကိုယ်ထဲမှာ သွေးတွေတအား လျှောက်သွားလို့နဲ့တူတယ်နော်..)
Don't sleep immediately: ထမင်းစားပြီးပြီးချင်း အိပ်လိုက်ရင် အစာကောင်းကောင်း မကျေတော့ပါဘူး။ အူလမ်းကြောင်းထဲမှာလည်း လေတွေ၊ ရောဂါပိုးတွေ ကျန်နေတတ်ပါတယ်။
witch83, (27/02/2013; 11:48AM; GMT+8) To Continue Reading
Posted by witch83 at 11:51 AM3comments:
"တိမ်တွေဟာ သိပ်လှတာပဲလို့ ကိုယ်ပြောရင်
ကျမဟာ မကြာခဏဆိုသလို လေယာဉ်တွေ စီးရပေမဲ့ ကိုယ်စီးရတဲ့ လေယာဉ်ချိန်တွေဟာ များသောအားဖြင့် မနက်အစောကြီး (သို့မဟုတ်) ညမိုးချုပ်တွေ ဖြစ်နေတတ်ပြီး အိပ်လိုက်လာတတ်တာ များပါတယ်။ တစ်ခါတစ်ရံကျတော့ ကိုယ့်ကိုကိုယ်တောင် ပြန်မေးမိပါတယ်။ အပြင်ကို မမြင်ရဘဲနဲ့ ဘာလို့ အမြဲတမ်း window seat ကိုပဲရွေးပြီး booking လုပ်မိနေသလဲဆိုတာ။ Aisle seat ဆို အပြင်ထွက်ရတောင် သက်သာပါသေးတယ်။
ဒီတစ်ခေါက် အလုပ်ကိစ္စနဲ့ ထိုင်ဝမ်သွားဖို့ ticket booking လုပ်တော့ Taiwan နဲ့ SGကြားမှာဆွဲတဲ့ လေယာဉ်ချိန်တွေ ပြောင်းသွားပါတယ်။ ည (၈)နာရီကျော်ကျော်မှာတစ်ကြိမ်၊ နေ့လည် (၂:၅၀)မှာတစ်ကြိမ် ဖြစ်သွားပါတယ်။ Lab test ပြီးမဲ့အချိန် ခန့်မှန်းရခက်တာကြောင့် အလုပ်ပြီးမဲ့နေ့ည (၈)နာရီလေယာဉ်ကို မယူဘဲ နောက်နေ့ နေ့လည် (၂း၅၀) လေယာဉ်ကိုပဲ book လိုက်ပါတယ်။
ထိုင်ဝမ်ကို သွားတိုင်း... ပျော်တတ်ပေမဲ့.. ဒီတစ်ခေါက်ကတော့ သိပ်.. မပျော်ပါဘူး။ project က ကြီးပြီး ဒီ customer ကို company က အရမ်းကို အလေးထားလွန်းတော့ လူက တော်တော်ကို စိတ်ဖိစီးမှုများ ပါတယ်။ နောက်တစ်ခုက ကိုယ်ကိုတိုင်က GePON technology ကို ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင် မရှိတဲ့အပြင် ... ဗီယက်နမ်က ဟိုတယ်တစ်ခုမှာ လုပ်ခဲ့တဲ့ GePON project ကို support လုပ်ခဲ့တုန်းက တက်ခဲ့တဲ့ compatibility issue တွေကို ခေါင်းကိုက်အောင် ရှင်းခဲ့ရတဲ့ အတွေ့အကြုံဆိုးကြီးကို မမေ့ နိုင်သေးတာကြောင့် GePON ဆိုတာနဲ့တင် လုက စိတ်နှလုံး ငြှိုးနွမ်းနေပါတယ်။
ခရီးမသွားခင်လည်း GePON project အတွက် HQ က အင်ဂျင်နီယာရယ်၊ PM ရယ်၊ ကိုယ့်မန်နေဂျာရယ်.. အင်မတန် လက်ပေါက်ကတ်တဲ့ customer ရယ်ကြားမှာ တော်တော်ကို ခေါင်းစားရပြီးတဲ့နောက်..
ထိုင်ဝမ်ရောက်ပြန်တော့လည်း Lab test လုပ်နေရလို့ ခေါင်းကိုက်ရပြန်ပါတယ်။ အဲ့ဒီကြားထဲမှာ ကိုယ့် mailbox ထဲ ဝင်ဝင်လာတဲ့ တခြား အီးမေး(လ်)တွေ၊ စလုံးမှာကျန်ခဲ့တဲ့ မန်နေဂျာက လှမ်းပို့ပို့နေတဲ့ sms တွေကိုကြည့်ပြီး ရူးချင်လာပါတယ်။ စလုံးပြန်မဲ့နေ့... Taoyuan လေဆိပ်ကိုရောက်တော့.. လူက တော်တော်ကို ဖလက်ပြနေပါပြီ။ လေဆိပ်ရောက်တော့ စိတ်တိုတိုနဲ့ ဖုန်းပိတ်ပစ်လိုက်ပါတယ်။
လေယာဉ်ပေါ်ရောက်ပြန်တော့လည်း အဆင်မပြေပါဘူး။ လူက တော်တော် များပါတယ်။ ဘေးက ထိုင်ဝမ်မလေးနှစ်ယောက်ကလည်း အင်မတန် စကားများပါတယ်။ ပိုဆိုးတာက သူတို့ နှစ်ယောက်ထဲကတစ်ယောက်က ပါးစပ် အတော် နံပါတယ်။ ခေါင်းတွေကိုက်လာပြီး လက်ထဲက ရှုဆေးဘူးကိုပဲ ဖိရှုနေရပါတယ်။ လေယာဉ်ကလည်း တော်တော်နဲ့ကို မထွက်နိုင်ပါဘူး။ ကြာလာတော့ သူတို့နှစ်ယောက်ကို စကား သိပ်..မပြောဖို့ ယဉ်ယဉ်ကျေးကျေးနဲ့ပြောပြီး တောင်းဆိုလိုက်ရင် ကောင်းမလားစဉ်းစားမိပါတယ်။ အဲ့လို စဉ်းစားနေတုန်းမှာပဲ လေယာဉ်ကြီးက စထွက်ပြီး သူတို့ထဲကတစ်ယောက်က ကြောက်သွားပြီး ငြိမ်သွားပါတယ်။ နောက်တစ်ယောက်ကလည်း အိပ်ပျော်သွားပါတယ်။ အဲ့ဒီအခါကျမှ လူလည်း သက်တောင့်သက်သာ ရှိသွားပါတော့တယ်။
လေယာဉ်ထွက်ခါစမှာတော့ မျက်လုံးပိတ်ပြီး နားကြပ်နဲ့ သီချင်းနားထောင်နေလိုက်ပါတယ်။ နောက်တစ်နာရီလောက်နေတော့ လေယာဉ်မယ်လေးက အအေးလာပေးတာနဲ့ အအေးသောက်ပြီး အပြင်ကိုကြည့်ပြီး လိုက်လာခဲ့ပါတယ်။ တိမ်ထူတဲ့နေ့မို့လားမသိပါဘူး။ လေယာဉ်က တော်တော်ခါပါတယ်။ ဒါပေမဲ့... လေယာဉ်ခါတာကိုလည်းမေ့... စိတ်ရောလူပါပင်ပန်းခဲ့သမျှကိုလည်းမေ့စေတဲ့အရာကို တွေ့ကြုံခဲ့ရပါတယ်။ အဲ့ဒါ ဘာဖြစ်မယ်လို့ ထင်ပါသလဲ??
တိမ်တွေလေ.. တိမ်တွေပေါ့... ပုံစံ အမျိုးမျိူးနဲ့ သိပ်လှတဲ့ တိမ်တွေပေါ့...
လေယာဉ်သွားတဲ့လမ်းတလျှောက် တိမ်တွေဟာ ညိုလိုက်၊ ပြာလိုက်နဲ့ လှချင်တိုင်း လှနေကြပါတယ်.. တစ်ချို့နေရာတွေမှာ အဆုပ်လိုက်ကလေးတွေ၊ တစ်ချို့ နေရာတွေမှာ အမှုန်လေးတွေ၊ တစ်ချို့နေရာမှာတော့ အပြင်လိုက်ကြီးတွေနဲ့ စိပ်စိပ်လေးတစ်မျိုး၊ ကျဲကျဲလေးတစ်ဖုံနဲ့ သိပ်ကို လှနေကြတာကို မြင်ရတာ အရာအားလုံးကို ခဏတော့ မေ့သွားသလိုပါပဲ။
အဲ.. သတိ ပြန်ဝင်လာတဲ့အချိန်မှာတော့ လက်ထဲက ဖုန်းနဲ့ ဓါတ်ပုံတွေ စွတ်ရိုက်တော့တာပါပဲ။ အောက်ကပုံတွေကတော့ ရိုက်ခဲ့တဲ့ပုံတွေထဲက အချို့ပေါ့ကွယ်...။
ပြီးခဲ့တဲ့ သုံးပတ် ကျော်... ထိုင်ဝမ်က ပြန်လာပြီးကတည်းက ဖတ်ချင်တဲ့စာအုပ်ကို ပြောပါဆိုရင် ဆရာမဂျူးရဲ့ "တိမ်နဲ့ချည်တဲ့ကြိုး"ပါပဲ။ အဲ့ဒါ ဘာလို့လည်း ဆိုရင်တော့.... ထိုင်ဝမ်က အပြန်ခရီးမှာ.. ပြာလိုက်၊ ညိုလိုက်၊ စိတ်လိုက်၊ ကျဲလိုက်နဲ့ ပုံစံမျိုးစုံနဲ့လှပနေကြတဲ့တိမ်တွေကို တွေ့မြင်ခံစားခဲ့ရလို့ပါပဲ။
ဆရာမ.. ဂျူးရဲ့ အဲ့ဒီ "တိမ်နဲ့ချည်တဲ့ကြိုး" ဝတ္ထုစာအုပ်ကို သူများဆီက ငှားဖတ်ပြီးတဲ့နောက် ကြိုက်လွန်းလို့ စာအုပ်အရောင်းဆိုင်သွားပြီး အပိုင် ဝယ်ထားခဲ့ပါတယ်။ စာအုပ်ကတော့ ရန်ကုန်မှာ ကျန်ခဲ့ပုံပါပဲ။ စလုံးက စာအုပ်ပုံးထဲမှာရှာတော့ မရှိပါဘူး။
ဝေးလံခေါင်သီတဲ့ ဒေသတွေက ခက်ခဲတဲ့ အပင်တွေကို လိုက်ရှာပြီး သုတေသနလုပ်ကြတဲ့ ထက်မြက်တဲ့ အမျိုးသမီးနှစ်ဦး...
ဆယ်ကျော်သက်ကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ စိတ်ကစားတတ်မှုနဲ့ မမျှော်လင့်ဘဲ ကိုယ့်ကြောင့် လူငယ်တစ်ယောက် အသက်ဆုံးရှုံးသွားလို့ ဖြစ်ရတဲ့ စိတ်မကောင်းမှု..
အချိန်တွေ ဆယ်စုနှစ်ကျော်ကြာလာမှ နေလို့မပျော်တော့ဘဲ ဒီကိစ္စပေါ်မှာ guilty ဖြစ်ပြီး ဇာတ်ကောင် အမျိုးသမီးက ချင်းပြည်နယ်မှာ ပြန်လာပြီး စာသင်ပေးခြင်းဖြင့် ကိုယ့်စိတ်ကို ပြန်လည် တည်ဆောက်နေခြင်း...
တစ်ယောက်ထဲအတွက် အသက်ရှင်နေတာမျိုး မဟုတ်ဘဲ လူအများအတွက် ပေးဆပ်ပြီး အသက်ရှင်နေချင်တဲ့ လူတွေအကြောင်း
သဘာဝနဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးလိုအပ်ချက်နဲ့ ဝေးလံခေါင်သီတဲ့ဒေသမှာ နေရတဲ့သူတွေရဲ့ လိုအပ်ချက်တွေကြားက အားပြိုင်မှု
ဓါတ်ပုံတွေရဲ့ အရေးပါပုံ၊ ဓါတ်ပုံတွေက ပြောတဲ့စကားများ
ချင်းလူမျိုးတွေရဲ့ ရိုးရာနဲ့ ယုံကြည်မှု၊ လူမျိုးစု မပျောက်ကွယ်လိုမှု ( သွေးမနှောလိုမှု)
စတဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို သိသိသာသာ တစ်မျိူး၊ မသိမသာတစ်မျိုး၊ တိုက်ရိုက်နည်းနဲ့ တစ်သွယ်၊ သွယ်ဝိုက်တဲ့နည်းနဲ့တစ်ဖုံ ရေးထားပါတယ်။ သို့ပေမဲ့ ... ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ဝန်ခံရမယ်ဆိုရင်တော့... အဲ့ဒီအချက်တွေကို ကျော်ပြီးတော့ စာအုပ်ကို ဖတ်နေရင်းနဲ့ စိတ်ထဲမှာ တကယ် ပေါ်ပေါက်လာတဲ့ အဖြစ်ချင်ဆုံးဆန္ဒက တိမ်တွေရှိတဲ့ တောင်ပေါ်ဒေသမှာ လျှောက်လည်ပြီး တိမ်တွေကြားထဲ လမ်းလျှောက်ချင်တာပါပဲ။
ဆရာမရဲ့ တိမ်တွေနဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ အရေးအသား၊ စာကြောင်းလေးတွေဟာ ကျမရဲ့ စိတ်ကို တကယ်ကို ညှို့  ယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
~ တိမ်တွေက ကိုယ့်အခန်းထဲကို ဝင်ရောက်လာတဲ့အခါ ~
~ အိမ်ထဲသို့ လွင့်မျောလျက် ဝင်ရောက်လာသော တိမ်တွေက သူမမျက်နှာကို ပွတ်တိုက်သွားသည့်အခါ အသည်းအေးလျက် အသက်ရှုပင် မှားမှားသွားသည် ~
~ တောင်အတက်မှာ ခြေလှမ်းနှေးကွေး မောပန်းပေမဲ့ အမောဖြေစရာ အတွေ့အကြုံကတော့ တိမ်တွေထဲသို့ ခရီးသွားရခြင်း ဖြစ်သည် ~
အခန်းထဲကို တိမ်တွေဝင်လာပြီး ကိုယ့်မျက်နှာကို ဖြတ်သွားတဲ့ အတွေ့အကြုံကို လက်တွေ့ ခံစားကြည့်ချင်စိတ်ဖြစ်ခဲ့သလို.. ငှက်တွေသွားကြည့်မဲ့နေရာကို လျှောက်ရတဲ့ လမ်းတစ်လျှောက် တိမ်တွေထဲခရီးသွားသလိုပါပဲလို့ ဆရာမကရေးသားခဲ့ပြန်တော့လည်း တကယ်ကို တိမ်တွေကြားထဲမှာ လမ်းလျှောက်ချင်တဲ့အာသီသတွေ ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ အချိန်တွေကကြာလာပြီး.. နေ့စဉ်လူနေမှုဘဝမှာ ပုံမှန် လှုပ်ရှားနေရတဲ့အတွက်ကြောင့် ဖြစ်ချင်တဲ့ ဆန္ဒတွေထဲက အဲ့ဒီဆန္ဒဟာလည်း အရောင်ဖျော့လာခဲ့ပါတယ်။
ခု.. ဒီ ထိုင်ဝမ်ခရီးက ပြန်အလာပြီးတဲ့အခါမှာတော့ ဒီဆန္ဒဟာ အရောင် ပြန်တောက်လာပြန်ပါပြီ။ တိမ်တွေရှိတဲ့ လှပတဲ့ တောင်ပေါ်ဒေသတစ်ခုကို ကိုယ်ချစ်တဲ့သူတွေနဲ့ အတူတူသွားပြီး အေးမြမှုနဲ့ လှပမှုတွေကို ခံစားဖို့ ကြိုးစားလိုက်ပါဦးမယ်။
"တိမ်တွေဟာ သိပ်လှတာပဲလို့ ကိုယ်ပြောရင် မင်းယုံလိုက်ပါ။"
စကားကြွင်း။ ။ "တိမ်နဲ့ချည်တဲ့ကြိုး"ကို ခရီးကပြန်ရောက်ရောက်ချင်း ဖတ်ချင်ပေမဲံ အလုပ်တွေ ရှုပ်နေပြီး အရင်တစ်ပတ် weekends မှာမှ ဖတ်လို့ပြီးပါတယ်။ (ခု.. ပြီးခဲ့တဲ့ weekend မဟုတ်ပါ။) ဖတ်ပြီးသွားတဲ့နောက် စာရေးမယ်ဆိုတော့လည်း ရုံးရွှေ့ဖို့ ကိစ္စတွေနဲ့ မအားပြန်ပါဘူး။ စရေးမိတော့လည်း တစ်ဝက်တစ်ပျက်မှာတင်ရပ်ပြီး ကြားဖြတ်ပို့(စ်)တွေ ရေးနေမိပြန်ပါတယ်။ draft ထဲမှာ ကြာနေပြီမို့ ဒီညတော့ ဒီပို့(စ်)လေးကို အပြီးသတ်လိုက်ပါတယ်။ မဟုတ်ရင် mood ပျောက်ပြီး "draft post မှသည် deleted postဆီသို့"ဆိုပြီး ဖြစ်သွားမှာစိုးလို့ပါ။ =)
witch83 ( 20/02/2013; 9:14PM; GMT+8)
Posted by witch83 at 9:13 PM7comments:
Labels: My Diary, သဘာဝအလှ, တွေ့ကြုံခဲ့တာလေးတွေ
ဟင်းချက်ဖြစ်သော စနေနေ့ (၁၆-၀၂-၂၀၁၂)
အခုတစ်လော ဟင်းမချက်ဖြစ်တာ တော်တော်ကြာပါပြီ။
အလုပ်တွေများနေပြီး အိမ်မှာကလည်း အိမ်ရှင်ရဲ့ မိဘနှစ်ပါးလာလည်နေလို့ အိမ်နောက်ဖေးမှာ ဝင်မရှုပ်ချင်တာကြောင့် ရှိတာနဲ့ စားရင်စား၊ လွယ်ကုပြီး ချက်ရမြန်တာတွေစားရင်စား၊ အပြင်မှာ ထွက်စားရင်စားနေခဲ့တာ များပါတယ်။ (အဲ.. တရုတ်နှစ်ကူး ရက်ရှည်ပိတ်တုန်းက တစ်ရက်တော့ ညီမဖြစ်သူက မုန့် ဟင်းခါးစားချင်တယ်၊ လာစားမယ်ဆိုလို့ မုန့်ဟင်းခါးတော့ ချက်လိုက်ပါသေးတယ်။)
ဖြစ်သလိုစားရတာတွေ၊ အပြင်စာတွေစားရတာများလာလို့ ငြီးငွေ့နေတဲ့အတွက်ကြောင့် ဒီတစ်ပတ်စနေမှာ ဟင်းချက်ဖို့ သောကြာနေ့ညနေက ဈေးဝယ်ထွက်ခဲ့ပါတယ်။
စနေမနက် အိပ်ရာကနိုးတော့ အရင်ဆုံး မနက်စာစား၊ ရေခဲသေတ္တာရှင်း.. ပြီးတော့ ဝယ်လာတဲ့အသစ်တွေကို မချက်ခင် ရေခဲသေတ္တာထဲမှာ ရှိနေတဲ့ လက်ကျန်တွေကို အရင် ရှင်းလိုက်ပါတယ်။ လက်ကျန်တွေဖြစ်တဲ့ minced pork ရယ်၊ ဝက်အူချောင်းရယ်၊ ကြက်အသည်းအမြစ်ရယ် မုန်လာဥနီတစ်တောင့်ရယ်၊ ဂေါ်ဖီတစ်စိတ်ရယ်၊ ငါးလုံး (၄)လုံးရယ်ကို ( အကုန်လုံး.. တို့စိ၊တို့စိ ကျန်တဲ့ဟာတွေကြီးပါ.. ) frozen ပဲစိမ်းစေ့လေးတွေနဲ့အတူရောပြီး ခေါက်ဆွဲကြော်လိုက်ပါတယ်။
ခေါက်ဆွဲကြော်ပြီးသွားတော့ တစ်ပွဲထည့်ပြီး ရေနွေးနဲ့လွေးလိုက်ပါတယ်။ လက်ကျန်တွေရှင်းပြီး ကြော်ထားတာပေမဲ့ စားလို့ တော်တော် ကောင်းပါတယ်။း)
စားသောက်ပြီး လုပ်စရာရှိတာတွေ လုပ်ပြီး နေ့လည်(၃)နာရီလောက်ကျတော့ ကြက်သားကိုင်ပါတယ်။
(မှတ်ချက်။ ။ ဒီလို ကြက်တစ်ကောင်လုံးကို ဝယ်တာ ဘဝမှာ ဒါ.. ပထမဦးဆုံးပါ။ ပြီးခဲ့တဲ့ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ကတည်းက ကြက်သားပလာတာ စားချင်နေတာမို့ သောကြာနေ့တုန်းက ဈေးသွားဝယ်တော့ ကြက်သားရှာတဲ့အခါ.. ကြက်သားခုတ်ပြီးသား အထုပ်တွေက မရှိတော့ပါဘူး။ စနေနေ့ဆို super market မှာ ပိုပြီး လူများတတ်တာကြောင့် အကောင်ဖျက်ရမှာကို အင်မတန် စိတ်ညစ်ပေမဲ့ အကောင်လိုက်ကြီးကိုပဲ စိတ်လျှော့ပြီး ဝယ်ခဲ့ပါတယ်။)
ကြက်ကို အတုံးတုံးပြီးသွားတော့ ရေဆေး.. ရေဆေးပြီးတော့ အရိုးတွေသတ်သတ်ခွဲ၊ ကျန်တဲ့အသားတွေကို တစ်ဝက်စီ ခွဲလိုက်ပါတယ်။ ကျန်တဲ့တစ်ဝက်ကို ဘူးသီးနဲ့ ကာလသားဟင်းချက်ဖို့ ဘူးထဲထည့်ပြီး ရေခဲသေတ္တာထဲ ထည့်ခဲလိုက်ပါတယ်။ ကျန်တဲ့တစ်ဝက်ကိုတော့ ချင်း(ဂျင်း)မှုန့်၊ ဆား၊ နနွင်းမှုန့်၊ မဆလာတို့နဲ့နယ်ပြီး နှပ်ထားလိုက်ပါတယ်။ ကြက်သားနှပ်ထားတဲ့အချိန်မှာ ပလာတာ ကြော်ပါတယ်။ တစ်ယောက်တည်းစားမှာမို့ (၃)ချပ်ပဲ ကြော်ပါတယ်။
ပလာတာကတော့ Spring Homeက plain roti parata ပါ။ မွှေးအောင် ထောပတ်နဲ့ ကြော်ပါတယ်။ အများကြီးထည့်စရာ မလိုပါဘူး။ ဆီနည်းနည်းနဲ့ မတူးအောင် ကြော်ချင်ရင်တော့ non-stick panကို ပူအောင်လုပ်လိုက်ပါ။ တော်တော်ပူပြီဆိုရင် ထောပတ်(သို့) ဆီအနည်းငယ်သာထည့်ပြီး တအိုးလုံး ဆီပြန့်သွားအောင် ဇွန်းနဲ့ ဖြန့်လိုက်ပါ။ ပြီးမှ parata ကိုထည့်လိုက်ရင် ချက်ချင်း ကြွတက်လာပါတယ်။ ကြွတက်လာတာနဲ့ တဖက်ကို အမြန်လှန်ပြီး မီးပိတ်လိုက်ပါ။ အဲ့လိုဆိုရင် ကြွပ်ကြွပ်အိအိနဲ့ မတူးတဲ့ ပလာတာကို ရပါလိမ့်မယ်။ ကြော်ပြီးသွားတော့ ပတ်စရာ ဆီစုတ်စက္ကူ မရှိတော့လို့ tissue paper တွေပဲ သုံးလိုက်ပါတယ်။ :P
ပလာတာကြော်ပြီးသွားတော့ အချဉ်လုပ်ပါတယ်။ ကြက်သွန်နီကို ပါးပါးလှီး၊ သံပုရာသီးညှစ်၊ အချဉ်သိပ်မပေါက်လို့ ready-made သံပုရာရည်တွေ လောင်းထည့်၊ ငြုပ်စိမ်းပါးပါးလှီးထည့်၊ ပူစီနံအရွက်တွေချွေထည့်ပြီးတဲ့အခါမှာတော့ အချဉ်ကိစ္စပြီးသွားပါတယ်။
အချဉ်လုပ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာ အိမ်ရှင် ဟင်းချက်ချင်နေပုံပေါက်တာနဲ့ ကိုယ်လည်း ခဏရပ်ပြီး အခန်းထဲဝင်ကာ စာတွေလျှောက်ဖတ်နေလိုက်ပါတယ်။ နည်းနည်းကြာတော့ အပြင်ပြန်ထွက်ပြီး ဆီသတ်ဖို့လုပ်ပါတယ်။ မြန်တဲ့ဆီသတ်နည်းကို ပြောပြပါမယ်။
စလုံးက အိမ်နားနီးချင်းတွေ complain မတက်အောင်ရော၊ ကိုယ့်အိမ်မှာလည်း သိပ်မနံအောင်ရော.. လုပ်လို့ရတဲ့နည်းပါ။ ဘာမှ မခက်ပါဘူး။ အိုးပူအောင်ထား၊ ဆီထည့်၊ ကြက်သွန်ဖြူထောင်းထားတာထည့်၊ ကြော်ပြီးသား ကြက်သွန်နီကြော်ပစ်ထည့်၊ ငြုပ်စိမ်းမှုန့်ထည့်.. မီးပိတ်လိုက်ရင် မြန်လည်းမြန်၊ သိပ်လည်း အကြာကြီး မကြော်ရတဲ့ ကြက်သွန်ဆီချက် ရပါတယ်။ အညှော်လည်း အနည်းနဲ့အများတော့ သက်သာပါတယ်။ ဒီမှာက.. ကြက်သွန်နီအစိမ်းကိုဝယ်လည်း တစ်ကျပ်ခွဲလောက် ပေးရပါတယ်။ ပြီးရင် ဒီက ကြက်သွန်နီတွေက မခြောက်ပါဘူး။ အစိုဓါတ်ပါ.ပါတယ်။ ဟင်းမချက်တာကြာရင်လည်း ကြက်သွန်နီတွေ ရိလာပြီး လွှင့်ပစ်ရပါတယ်။ အဲ့ဒီတော့ ဈေးသိပ်မကွာတဲ့ ကြက်သွန်နီကြော်သုံးတာ ပို..အဆင်ပြေပါတယ်။ ကြက်သွန်အစိမ်းက အသုတ်သုတ်ဖို့ လောက်ပဲ ကောင်းပါတယ်။ ( ကိုယ့်အယူအဆနဲ့ကိုယ်ပါ။ မြန်ကောင်းသက်သာနည်းလေ..ဟဲ..ဟဲ..။ chocothazin .. နည်းယူလိုက ယူနိုင်ပါသည်။ :P )
ကြက်သွန်ဆီချက်သတ်ပြီးသွားတော့ နှပ်ထားတဲ့ ကြက်သားတုံးတွေကိုထည့်ပြီး မွှေ၊ ရေထည့်၊ Rendang sauce powder ထည့်ပြီး မွှေ.. ပြီးတော့ အဖုံးပိတ်ပြီး ချက်ထားလိုက်ပါတယ်။ တစ်ရေကုန်ခါနီးတော့ အာလူးထည့်၊ ဆီပြန်တော့ နူးနေပြီမို့ မဆာလာထည့်။ မီးပိတ်။ ခဏကြာတော့ မီးပြန်ဖွင့်။ ဆီကျန်ရေကျန်ဖြစ်အောင် ရေပြန်ထည့် ပွက်လာတော့ အိုးချ။ အလွန်မွှေးကြိုင်ပြီး အနံ့အရသာရှိသော ကြက်သားအာလူးဟင်း ရပါပြီ။ ^^
ညနေဘက် ရေမိုးချိုး၊ ခေါင်းလျှော်ပြီးတဲ့အခါမှာတော့ ညနေစာပြင်ပါတော့တယ်။ ပလာတာပေါ်မှာ တင်ထားတဲ့ tissue paper တွေခွာပြီး ကတ်ကြေးနဲ့ သေးသေးလေးတွေဖြစ်အောင် ညှပ်ပါတယ်။ ပြီးတော့ ကြက်သားအာလူးထည့်၊ အချဉ်ထည့်ပြီး ရေနွေးကြမ်းနဲ့ လွေးလိုက်ပါတော့တယ်ရှင်။
အားလုံးပဲ ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ ကြပါစေ။
witch83 (17/02/2013; 4:03PM; GMT+8)
Posted by witch83 at 4:01 PM3comments:
စကားကြွင်း။ ။Sis Jasmine ဆီက ဆရာ မောင်စိန်ဝင်း (ပုတီးကုန်း)ရဲ့ ဒီ... "သောကခြေရာ"ဆိုတဲ့ ကဗျာလေးကိုတွေ့ပြီး ကြိုက်လွန်းလို့ အရင်နှစ်.. ဒီဇင်ဘာလ (၂၆)ရက်နေ့တုန်းကဒီဘလော့ပေါ်မှာ တင်ဖူးပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဘယ်လိုက ဘယ်လို ဖြစ်သွားလဲ မသိပါဘူး။ Spam moderation ထိသွားပုံ ရပါတယ်။ ဘလော့ပေါ်မှာ လုံးဝ မရှိတော့ပါဘူး။ ဒါကြောင့် ဒီနေ့ ဖေဖော်ဝါရီလ (၁၄)ရက်နေ့မှာ Valentines' Day အမှတ်တရအနေနဲ့ ပြန်တင်လိုက်ပါတယ်။ အောက်က screen shot တွေကတော့ မေး(လ်)ထဲကနေ ပြန်ယူထားတာပါ။း)
witch83 (14/02/2013; 8:00AM; GMT+8)
Posted by witch83 at 8:03 AM5comments:
Labels: My Collection, ကဗျာ
Timeless Beauty 2012
(၂၀၁၃)ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ (၅)ရက် နေ့မှာ Timeless Beauty 2012ဆုရသူကို Missosology က ကြေငြာလိုက်ပါတယ်။ final countdown link မှာ ဆုရသူတွေကို ဖြေးဖြေးချင်း top 20 ကနေ အရှေ့ ကို တိုးတိုးပြီး ကြေငြာသွားရာကနေ နောက်ဆုံးဆုရသူကိုတော့ တော်တော်ကြာမှ ကြေငြာပေးပါတယ်။
Timeless beaty 2012 ဆုနဲ့ Ideal beauty 2012 ဆုရဲ့ ကွာခြားချက်ကတော့ timeless က big4queens က semi-finalists တွေထဲကမှ အယောက်(၂၀)ကို ရွေးတာပါ။ Ideal beauty ကတော့ big4queens အပြင် miss USA နဲ့ miss supernational က ပြိုင်ပွဲဝင်တွေအားလုံးအပေါ်မှာ ရွေးတာပါ။
1. Timeless Beauty 2012 Winner
(၂၀၁၂)ခုနှစ်ရဲ့ timeless beauty ပိုင်ရှင်ကတော့ Miss Universe 2012 - Venuzula, Irene Esser ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဆုရတဲ့သူ အယောက်(၂၀)ကို ဖြေးဖြေးချင်း ကြေငြာပေးပြီး နောက်ဆုံး စကာတင်နှစ်ယောက်နေရာရောက်မှ တော်တော် ကြာသွားပြီး ဖေဖော်ဝါရီလ (၅)ရက်နေ့ကျမှ Irene Esser ဆိုပြီး ကြေငြာပေးတာပါ။
MU ပြိုင်ပွဲဝင်တွေကြားမှာ သူများတွေနဲ့မတူ သိသိသာသာ ကွဲထွက်နေတဲ့ Irene ကို ဒိုင်တွေက ဒီ timeless beauty 2012 ဆုကို ပေးလိုက်ပါတယ်။ ပြိုင်ပွဲဝင်တဲ့နေရာမှာ ဖြစ်သင့်တာထက် နည်းနည်းပိုသွက်နေပေမဲ့ အဲ့ဒီအချက်ကပဲ သူမကို ဝက်ဝက်ကွဲအားပေးနေကြတဲ့ အင်အားတောင့်တင်းတဲ့ ပရိတ်သတ်တွေ.. သူမကို ပိုချစ်စေတဲ့အချက်လို့ လူတစ်ချို့က ဆိုကြပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ သူမကိုသူမ ယုံကြည်မှုရှိပြီး သွက်လက်ပျော်ရွှင်နေတဲ့အချက်ကို ဖြစ်စေတဲ့ အကြောင်းရင်းကို Irene ဖြေထားတဲ့ အင်တာဗျူးတွေကနေတဆင့် ခန့်မှန်းကြည့်ပါတယ်။
သူမ .. အင်တာဗျူးတစ်ခုမှာ ပြောခဲ့တာကတော့
" နောက်တစ်ကြိမ် ဘဝဆိုတာကို ပြန်လည်ရွေးချယ်ရမှာဆိုရင်တောင် သူမရဲ့ ယခု လက်ရှိဘဝကိုပဲ ရွေးချယ်မှာပါ"
တဲ့။ (မိမိဘဝကို ကျေနပ်ပျော်ရွှင်ကြတဲ့သူတွေဟာ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ပိုပြီး ယုံကြည်မှု ရှိတတ်ကြပါတယ်။) Final question မှာ laws နဲ့ leysကို မှားပြောလို့ လူတစ်ချို့က Ireneကို ပျက်ရယ်ပြုခဲ့ကြပေမဲ့ အဲ့ဒီအချက်က Irene ရဲ့ ထူးခြားမှုနဲ့ လှပမှုကို ကွယ်ပျောက်သွားအောင် မလုပ်နိုင်ပါဘူး။
(မှတ်ချက်။ ။ ကိုယ်ကြိုက်တဲ့သူဆိုတော့ အဲ့လိုပဲ ပြောရတယ်။ မမချောက တော်တော်တော့ အသွက်လွန်တာ။ :D )
Irene, Miss Venezula ဆု ရတုန်းက
Elegance of Irene Esser =)
ဆုရသွားတဲ့ Irene အကြောင်းကို ပြောပြီးသွားပြီဆိုတော့ ကျန်တဲ့ (၁၉)ယောက် အကြောင်းလည်း ပြောပါရစေ။ နံပါတ်စဉ်နဲ့ပဲတပ်ပြီး ပြောပါမယ်။
2. Melida Bam, Miss Universe - South Africa
Timeless Beauty 2012 ရဲ့ 1st runner-upဆုကိုရတဲ့ Melindaဟာလည်း Irene လို တော်တော်လေးကို ပရိတ်သတ်အင်အားတောင့်တင်းတဲ့ အလှမယ်ပါ။ ကျမကတော့ သူ့ကို သိပ်.. မကြိုက်ပါဘူး။ သူမကို beauty specialist တွေက တော်တော် nominateလုပ်ကြပေမဲ့ top 16 မှာတင်ပဲ ပြုတ်ကျန်ခဲ့ပါတယ်။ top 10 ကို မပါလာပါဘူး။
3. Elizabeta Burg, MU2012 - Croatia
မေးရိုးကျတဲ့ မျက်နှာလှလှလေးကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့၊ "silent killer of the competition" လို့ လူတွေ ခေါ်ဆိုကြတဲ့ Elizabeta ကတော့ ကျမရဲ့ favourite တွေထဲက တစ်ယောက်ပါ။ performance တော့ သိပ်မကောင်းပါဘူး။ သူမ..top 16 မှာ ပြုတ်ကျန်ပြီး top 10မှာ မပါခဲ့လို့ တော်တော် စိတ်မကောင်း ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။
4. Olivia Culpo, MU 2012- USA, Miss Universe 2012 Winner
Olivia ကိုတော့ အရပ်ပုတာကလွဲရင် ငြိမ်ပြီး အေးချမ်းလို့၊ sweet ဖြစ်လို့၊ အဆင့်အတန်းရှိတဲ့ပုံစံလေးနဲမို့ ချစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ MU 2012 contestantတွေထဲမှာ သူ့ထက် ပိုပြီး အလားအလာရှိတဲ့ အလှမယ်တွေရှိတယ်ဆိုတဲ့ အချက်ကိုတော့ လက်ခံပါတယ်။ :)
Classy & Sexy at the same time
5. Tereza Fajksova, Miss Earth -2012, Czech ( Miss Earth 2012 Winner)
Terezaကတော့ သူ့ကို မြင်လိုက်ရင်ကို ကြာကြာကြည့်ချင်စရာကောင်းတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ Miss Earth ပြိုင်ပွဲကို မကြည့်လိုက်ပေမဲ့ သူ့ပုံတွေ တက်လာတော့ မြင်လိုက်တာနဲ့ကို တော်တော် လှပါလားလို့ မှတ်ချက်ပေးရလောက်တဲ့ အလှမယ်ပါ။
6. Marcelina Zawadzka, MU 2012 - Poland
နံပါတ်(၆)ချိတ်တဲ့ Marcelina ကတော့ ကျမရဲ့ favourite list ထဲကပါ။ ပွဲမတိုင်ခင် ဟိုးအစောကြီးကတည်းက ဓါတ်ပုံတွေ့ပြီး ကြိုက်ခဲ့တာပါ။ သူ... လှလား မလှဘူးလားဆိုတာကတော့ အောက်က movie clip လေးကိုသာ ကြည့်ပါတော့။ ^^
သူမဟာ MU 2012 ပြိုင်ပွဲတုန်းက ငြိမ်သလောက် အောက်က fashion show မှာတော့ မမချောက သွက်ပါတယ်။ သူမဟာ ဖော်ရွေပြီး ရင့်ကျက်တဲ့.. စိတ်ကောင်းရှိတဲ့ အမျိုးသမီးလို့ MU ပြိုင်ပွဲဝင် အလှမယ်တော်တော်များများက ဆိုကြပါတယ်။ :)
သူမလည်း ပြိုင်ပွဲမှာ top 16 မှာတင် ပြီးသွားပါတယ်။ ဆုမရတာ ကြာပြီဖြစ်တဲ့ poland ကို အမောပြေစေတဲ့ အလှမယ် ဖြစ်ပါတယ်။
7. Wenxia Yu, MW 2012 - China ( Miss World 2012 Winner)
ဘဝကို ခက်ခက်ခဲခဲ ဖြတ်သန်းလာခဲ့ရတဲ့ .. opera သီချင်းအဆိုပါရမီရှင်၊ Miss World 2012 winner, Wenxia Yu ကတော့ timeless beauty 2012 မှာ သတ္တမ.. ချိတ်ပါတယ်။
8. Janine Tugonon, MU 2012 - Philippine
Miss Universe 2012 , 1st runner up, Janine Tugonon ကတော့ timeless beauty 2012 list ရဲ့နံပါတ်(၈)မှာပါ။ ဖြတ်ထိုးဥာဏ်ကောင်းပြီး catwalk လျှောက်တာ တော်တော် လှပါတယ်။
9. Blanca Aljibes, Miss International 2012 - Vanezula
နံပါတ် (၉)ကို ချိတ်သူကတော့ အချောအလှ ပေါတဲ့ Vanezula ကပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ Miss International 2012 contestant ပါ။
10. Sophie Moulds, MW 2012 - Wales
Timeless Beauty 2012 ရဲ့ နံပါတ် (၁၀)ကို ချိတ်တဲ့သူကတော့ Miss World, 1st runner-up, Sophie Moulds ပါ။ တော်တော်လေးကို ဆွဲဆောင်မှုရှိပြီး ကိုယ်လုံးလည်း တော်တော်လှပါတယ်။ Ideal Beauty ကပေးတဲ့ Body of the year, 2012 ဆုကို ရထားတဲ့သူလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
11.Waratthaya Wongchayaporn, Miss Earth 2012 - Thailand
12. Diana Avdiu, MU2012 - Kosovo
မျက်လုံးလှပြီး.. classy beauty ပိုင်ရှင်ဖြစ်တဲ့.. Miss Photogenice ( MU2012) ဆုပိုင်ရှင် Diana ကတော့ နံပါတ်(၁၂)ပါ။
13. Melissa Varon, Miss International 2012 - Columbia
Melissa Varon ကို အရမ်းကြိုက်ပါတယ်။ ( သူမရဲ့ FB accountမှာတော့ Melissa Carolina လို့ ရေးထားပါတယ်။)
နံပါတ် (၁၃)ကိုရသွားတဲ့ Melissa ကတော့ Miss International ပွဲမှာ တော်တော် တစ်..ကြိုပြေးခဲ့တာပါ။ တကယ့် တကယ်တမ်းတော့ သူမရဲ့ကိုယ်လုံးက ပါးပါးလေးပေမဲ့ catwalk လျှောက်တဲ့အခါ၊ pose ပေးတဲ့အခါတွေမှာ ကိုယ်လုံးက အပျံစား ဖြစ်သွားပါတယ်။ မျက်နှာလေးကလည်း တော်တော် ဆွဲဆောင်မှု ရှိပါတယ်။ ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ သူမရဲ့ မျက်နှာလေးမှာ အတင်း မလုပ်ထားဘဲနဲ့ကို ညှို့ ဓါတ်ကလေးလည်း ပါသလိုပါပဲ။ ဒါဟာလည်း talent တစ်ခု ပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ top 16 တွေ တစ်ဦးချင်းစီကို စင်ပေါ်မှာ စကားပြောခိုင်းတဲ့အခါမှာတော့ သိပ်.. မမိုက်ပါဘူး။ တကယ်ဆို Miss International ဆိုတာ Miss Universe ပြိုင်ပွဲလို မခက်ပါဘူး။ ဆုရခဲ့ရင် သူမ ဘာလုပ်မယ်။ ဘာကြောင့် သူမဟာ ဒီဆုကို ရသင့်တယ်ဆိုတာကို introduce လုပ်တဲ့ပြောဆိုခွင့်ကို top 16 အားလုံးကို တန်းတူ အခွင့်အရေး ပေးထားတာမို့ ဒီထက် ပိုကောင်းအောင် ပြောဖို့ကြိုးစားခဲ့သင့်ပါတယ်။
( Miss Universe ဆို ဘယ်မေးခွန်းကို ဖြေရမယ်ဆိုတာကို ကြိုသိထားရတာ မဟုတ်ပါဘူး။ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ဖြေရတဲ့မေးခွန်းလည်း မတူကြပါဘူး။ MU မှာလည်း .. အရင်တုန်းကတော့ မေးခွန်းတူတာ တစ်ခါ၊ မတူတာတစ်ခါ ဖြေရပါတယ်။)
14. Shristi Shrestha, Miss World 2012 - Nepal
နံပါတ် (၁၄)ရတဲ့ Miss World Nepal ကိုတော့ timeless beatuy 2012 ရဲ့ top 20 မှာပါမှ သတိထားမိတာပါ။ :) ဒိုင်တွေက firece beauty လို့ ပြောကြပါတယ်။
15. Marianan Berumen, Miss World Mexico
Timeless beauty ရဲ့ အမှတ်စဉ် (၁၅)ကိုရသွားတဲ့ MW-Mexico ကတော့ ပြိုင်ပွဲမှာ ဒီထက်ပိုတဲ့ အောင်မြင်မှုတွေ ရသင့်တယ်လို့ ဒိုင်တွေက ဆိုကြပါတယ်။
16. Elizabeth Golovanova, Miss Universe Russia
အဆင့် (၁၆)ချိတ်တဲ့သူကတော့ ကျမချစ်တဲ့ MU Russia, Elizabeth ပါ။ တကယ်လို့များ မနက်ဖြန် ကမ္ဘာပျက်တော့မယ်ဆိုရင်.. ဝမှာ မကြောက်ရတော့တဲ့အတွက်ကြောင့် ချောကလက်တွေ အဝစားပစ်လိုက်မယ်လို့ MU2012 အင်တာဗျူးက ဖြေခဲ့တဲ့သူ ဖြစ်ပါတယ်။ Elizabethဟာ Miss World ပြိုင်ပွဲတုန်းက နာမည် အရမ်းကြီးပြီး အားပေးတဲ့သူတွေ အများကြီး ရှိခဲ့ပေမဲ့ top 16တောင် မဝင်ခဲ့ရပါဘူး။ သူမကို သိပ်ပြီး အားမပေးကြတဲ့ MU 2012 ပြိုင်ပွဲမှာမှ top 10 ဝင်ခဲ့တာပါ။ တကယ်တော့ သူမရဲ့ personalityဟာ Miss World နဲ့ ပိုကိုက်ပါတယ်။
( ဒါနဲ့.. စကားမစပ်.. Miss World ဆိုလို့ ... Miss Myanmar, Nang Khin Zay Yarကို ရှေ့နှစ် Miss World Organization က သူမကို ဝင်ပြိုင်ဖို့ ဖိတ်ခေါ်ထားတယ်လို့ သိရပါတယ်။ သတင်းကို လိုက်ရှာကြည့်တော့ သေချာတဲ့သတင်း မတွေ့ရပါဘူး။ Miss World ရဲ့ website မှာသွားကြည့်တော့လည်း contestant list ထဲမှာ မြန်မာ မပါသေးပါဘူး။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် သူ..အခုလုပ်နေတဲ့ "နာရေးကုညီမှုအသင်း" activity ကတော့ Miss World မှာ ဝင်ပြိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင် "Beauty withaPurpose"ဆုကို ရနိုင်ပါတယ်။ နန်းခင်ဇေယျာဟာ နိုင်ငံတကာ အလှမယ်စံနှုန်းကို မမီပေမဲ့ .. သူ့ရဲ့ ကိုယ်လုံးကိုယ်ပေါက်ဟာ သူ့ဟာနဲ့သူ ရှိသင့်တဲ့နေရာမှာ အကွေ့အကောက်တွေ ရှိပါတယ်။ Missosology ရဲ့ first round pick up for swimsuit မှာ သူမ.. ပါပါတယ်။ second round မှာသာ ပြုတ်ကျန်ခဲ့တာ။ နောက်ပြီး အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် ကြိုးစားမယ်ဆိုတဲ့ စိတ်ဓါတ်လည်း ရှိပါတယ်။ Ideal Beauty ကပေးတဲ့ best performer ဆုမှာလည်း final5shortlist စာရင်းမှာ ပါ..ပါတယ်။ English စကားပြောတာလည်း သိပ်.. မဆိုးပါဘူး။ )
17. Osmariel Villalobos, Miss Earh Vanezula
Miss Earth ပြိုင်ပွဲကို မကြည့်လိုက်လို့ သူ့အကြောင်းတော့ သိပ်.. မသိပါဘူး။
18. Melody Mir, Miss International Domanican Republic
Miss International, top 16 တွေထဲမှာ sincere speaker တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Melody Mir ဟာ ငြိမ်ငြိမ်လေးနဲ့ အဆင့်တန်းရှိရှိလှသူတစ်ဦး ဖြစ်ပါတယ်။ အရပ်လည်းမြင့်ပြီး ကိုယ်လုံးလည်း တော်တော် လှပါတယ်။ Miss International 3rd runner-up ပါ။
19. Alize Lily Mounter, Miss International 2012 - UK
ကြွကြွလေးနဲ့ သွက်သွက်လေး catwalk လျှောက်တတ်တဲ့ Miss UK international ကတော့ နံပါတ် (၁၉)မှာပါ။ သူမကို ဂျပန်ကီမိုနိုလေးဝတ်ပြီး ရိုက်ထားတဲ့ ဓါတ်ပုံကို စမြင်ပြီးကတည်းက ကြိုက်တာပါ။ မျက်နှာလေးက အရုပ်မျက်နှာလေးနဲ့ တူပါတယ်။
20. Miadusha Mayadunne, Miss International 2012 - Sri Linka
သူမနိုင်ငံက တစ်ခါမှ မရဘူးတဲ့ big ranking ကို ယူပေးတဲ့ Miss.Sri Linka ကတော့ timeless beauty ရဲ့ အဆင့် (၂၀)ပါ။ top 16 မှာ sincere speech ကိုပေးတဲ့ အလှမယ် ဖြစ်ပါတယ်။ Miss International 2012 ရဲ့ 2nd runner-up ပါ။
( မှတ်ချက်။ ။ Miss International 2012 ရဲ့ top-5 pageantတွေထဲမှာ Miss Japan ကလွဲရင် အားလုံးက sincere speaker တွေပါ။ ကြည့်ရတာ Miss International 2012 ရဲ့ ဒိုင်တွေက ဒီအချက်ကို တော်တော် သဘောကျပုံရပါတယ်။ sincere speech ပေးတဲ့ အလှမယ်တွေထဲကမှ အကောင်းဆုံး ပြောသွားတဲ့ Miss Finladက 1st runner-upဆုကို ရခဲ့ပါတယ်။ )
ဒီ top-20 list ထဲမှာ ကိုယ်ကြိုက်တဲ့၊ အားပေးခဲ့တဲ့ မယ်တွေပါတာမို့ ဝမ်းသာမိပါတယ်။ နောက်ပြီး... ဒီနှစ်ရဲ့ timeless beauty ဆုရတဲ့သူတွေကို သတိထားကြည့်မိမယ်ဆိုရင် အောက်ပါ အချက်တွေကို တွေ့နိုင်ပါတယ်။
Big4queens ထဲက queen တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Miss International 2012 winner, Miss Japan မပါပါဘူး။
Vanezula က miss (၄)ယောက်မှာ Miss World - Vanezula တစ်ယောက်ပဲ top-20 ထဲမှာ မပါပါဘူး။ ကျန်တဲ့သုံးယောက်လုံး timeless beauty စာရင်း ဝင်ကြပါတယ်။
Timeless beauty list မှာ Irene နဲ့ Miss.Nepal ကလွဲရင် ငြိမ်ပြီး classy ဖြစ်တဲ့၊ လှတာထက် ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ အလှမယ်တွေ အရွေးခံရပါတယ်။
ဆုရတဲ့ အလှမယ် အယောက်(၂၀)အကြောင်း ပြောပြီးသွားပြီမို့ ဒီပို့(စ်)လေးကို ဒီနေရာမှာ နိဂုံးချုပ်ပါရစေ။
with83 (12/02/2013; 2:37PM; GMT+8)
Posted by witch83 at 2:40 PM2comments:
Labels: Beauty Pageant, သတင်း